MeetingHero: App ho an'ny famokarana fivoriana | Martech Zone
MeetingHero: App ho an'ny famokarana fivoriana
Talata, Jona 10, 2014 Douglas Karr
Ny mpivarotra dia misy fivoriana mandrakariva toy ny maso ivoho… ny fivoriana no fototry ny filamatra sy ny drafitra. Saingy ny fivoriana dia mety tsy hamokatra ihany koa. Na dia maro aza ny olona maniry fivoriana amin'ny fotoana rehetra dia matetika aho no manohitra. Mandoa hetra sy lafo ny fivoriana. Indraindray ny tahotra dia miteraka fivoriana izay tian'ny olona hanaronana ny vodiny fotsiny. Amin'ny fotoana hafa, ny fivoriana dia miteraka asa mihoatra ny taonina na dia mbola tsy vita aza ianao.
Vao haingana aho no nanoratra lahatsoratra iray nanontany hoe, Ny efitrano fivoriana banga ve dia famantarana ny famokarana? ary taona vitsivitsy lasa izay dia niteny an'izany mihitsy aho Ny fivoriana dia ny fahafatesan'ny famokarana amerikana.
Tsy nanao vazivazy aho… Vao avy nametra-pialana tamin'ny orinasa lehibe iray izay nisy fivoriana 30+ mahery isan-kerinandro. Nijanona tany amin'ny fivoriana tsy nisy zava-kendrena, antony nahatongavako tany, ary drafitry ny hetsika aho. Ny fivoriako dia nidina adiny iray na roa isan-kerinandro ary namokatra bebe kokoa noho ny hatramin'izay aho.
Nilaza izy ireo fa misy rindranasa ho an'ny zava-drehetra, ary izao dia mety hanana iray fotsiny isika hihaonana amin'ny famokarana, Fihaonana. Mora ampiasaina amin'ny telefaona, takelaka ary solosaina ny MeetingHero hahafahanao mahazo antsipiriany lehibe amin'ny fotoana rehetra.
Fampidirana ny FeaturesHareHero
Sambory sy hiara-hiasa amin'ny fotoana tena izy - Mora ny fiaraha-miasa sy misambotra fivoriana fitsikerana
pitsopitsony ka re ny rehetra ary tsy misy very.
Fivoriana fohy sy mifantoka - Ny MeetingHero dia manamora ny fahaizanao sy ny ekipanao mamorona, mizara ary mifikitra amin'ny fandaharam-pivoriana mba hahafahanao manana fifanakalozan-kevitra mifantoka sy mamokatra ary fanatontosana misy dikany.
Mandrosoa fanapahan-kevitra bebe kokoa - Amin'ny alàlan'ny fanomezana firafitra mety tsara mandritra ny fivorianao, ny MeetingHero dia manampy amin'ny fitarihana ny ekipanao handray fanapahan-kevitra sy hanaiky ny dingana manaraka.
Mijanona fampahalalana miaraka amin'ny famintinana fivoriana azo zaraina - Ny fivoriana rehetra dia manana fidirana mora azo, azo zaraina famintinana ny fivoriana, mba hahafahanao miala amin'ny fivoriana ary mbola mahazo vaovao hatrany.
Ny naotinao amin'ny fivoriana rehetra - Ny MeetingHero dia mandamina ny naoty nihaonanao rehetra tamin'ny fivorianao rehetra mba hahafahanao mahatadidy mora foana izay noresahinao, inona ny fanapahan-kevitra noraisinao ary inona no tsy voavaha.
Calendar Integration - Mifanindran-dàlana amin'i MeetingHero amin'ny Google Kalandrie (ny hafa ho avy tsy ho ela), mba hahafahanao mamorona sy manasa ny olona hivory amin'ny fomba fanaonao hatrany, ary ampiasao ny MeetingHero hahazoana antoka fa mahomby sy mahaliana kokoa ireo fivoriana ireo.
Tags: draharahaAppkalandriefampidirana kalandriefiaraha-miasafanapahan-kevitragoogle kalandriefihaonanafihaonanafivorianafinday fampiharana
Ny tsy fahaizanao mamaly dia manimba ny paikadinao amin'ny haino aman-jery sosialy
11 Jun 2014 amin'ny 5:55 AM
Ny fivoriana dia mety mampihoron-koditra indraindray, azoko tsara, tsy azo antoka, fa mety hanome aingam-panahy zavatra kanto ho antsika rehetra mandritra ny iray,
Mahafinaritra ahy ny miala amin'ireo fivoriana sasantsasany. Tsy mbola nampiasa an'ity fampiharana ity aho fa hitako fa mahaliana, indrindra fa tiako ny ampahan'ny hafatrao miaraka amin'ireo fiasa, napetraka tsara. Amin'izao fotoana izao dia mampiasa rindrambaiko antsoina hoe The Meetings avy amin'ny orinasa antsoina hoe Exquisitus aho, manana zavatra tsy mbola noeritreretinao akory izany, tiako izany satria mifangaro miaraka amina fampiharana marobe izy io.
16 Jun 2014 amin'ny 9:44 AM
Mbola fitaovana vaovao tsara izy io saingy tiako be ilay izy satria tsotra sy azo ampiasaina. Misy fotokevitra vitsivitsy tsy azonao atao (tsy afaka mamafa ny "fihaonana" izay fanendrena alimanaka fotsiny satria misintona tanteraka amin'ny fampifanarahana ny kalandrie anao) fa amin'ny ankapobeny dia fitaovana tena tsara.
Jun 16, 2014 ao amin'ny 3: 34 PM
Hevitra tsara Chris! Misaotra nizara izany vaovao izany. Heveriko fa izay manampy amin'ny teti-bola kely amin'ny fivoriana kely dia dingana iray mankany amin'ny lalana marina!